आईपीएल २०२१ सर्वश्रेष्ठ С क्रिकेटर
सुझाव र भविष्यवाणी
नि: शुल्क लाइभ स्ट्रिमि।
हामी सामाजिक नेटवर्क मा छौं
इन्डियन प्रीमियर लिग २०२१ मा शीर्ष क्रिकेटरहरू
केन रिचर्डसन एक अष्ट्रेलियाली खेलाडी हुन् जसले आफ्नो अद्भुत बलि bow कौशलका कारण चर्कोमा आए। ऊ दायाँ हातको तेज गेंदबाज हो, जुन राष्ट्रिय स्तरमा अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जे होस्, जब यो ...
शेन वार्नको विरासत अन्तमा अगाडि बढाउँदै, एडम जम्पा आफ्नो क्लासिक तेज स्पिनहरू दिँदैछन्। जे भए पनि उसको अगाडि ब्याट्सम्यान जे भए पनि यस युवा गेंदबाजले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्न बिर्सदैनन्। अहिले सम्म, त्यसो ...
एक अटो रिक्शा चालकको छोराले आफू आफैंमा सक्षम भएको प्रमाणित गर्‍यो र संसारलाई देखाउँदै केही पनि कच्चा प्रतिभा रोक्न सक्दैन। जब सनराइजर्स हैदराबादले उनलाई २ करोड INR मा किन्यो, यसले सम्पूर्ण भारत बनायो ...
भारत टोलीले नयाँ खेलाडीहरूलाई अवसर दिइरहेको छ, अधिक र अधिक विशेष गेंदबाजहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै छन्। ती मध्ये एक नवदीप सैनी हो। २०१-18-१-18 दिल्ली दिल्ली रणजी ट्रफी प्रतियोगिताको दौरान, नवदीप ...
ग्लेन म्याक्सवेल एक नाम हो जससँग तपाईंलाई लिलामीमा पनि गूजब्रप्स प्रदान गर्ने शक्ति छ। आईपीएलमा हरेक पटक उसको फिल्डिंग र बलिlingले हामीलाई अचम्मित पारे। तर उनको कडा पोइन्ट उनको ब्याटि capacity क्षमता हो। शब्द...
जब भारतको अर्को पुस्ताका खेलाडीहरूको सूचीको कुरा आउँछ, वाशिंगटन सुन्दर त्यसमा शीर्ष स्थान हुनेछ। तमिलनाडुका १ 18 बर्षे केटाले यु १ in खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ।
जब आरसीबी वा रॉयल चैलेन्जर बंगलोरको टीमको कुरा आउँछ, प्रत्येक फ्यानले मिस्टर 360 360० उर्फ एबी डिभिलियर्सको ब्याटिting हेर्न मन पराउँछन्। विराट कोहली पछि, यदि कोही विश्वास गर्न को लागी छ, निस्सन्देह, उनी ...
देवदत्त पादक्कल प्रख्यात नाम हो जब यो यू १ India भारत स्क्वाडको कुरा आउँछ। उनले खेलमा ब्याटि ofको सबैभन्दा राम्रो फार्म प्रस्तुत गरे। देवदत्त पाडिक्काल बायाँ हातका ब्याट्सम्यान र बलिlingमा अफिसका अमास्टर छन् ....
पावन देशपांडे, कर्नाटकमा जन्मिएका क्रिकेटर जो बायाँ हातले ब्याटि। गर्दछ र दायाँ हातको अफ-ब्रेकमा गेंदबाजी गर्दछ। उनी कर्नाटक क्रिकेट टीमका लागि एक अलिराउन्डर हो, यस क्रिकेटरको पूरा नाम पवन उदय हो ...
शहबाज ‌एम्मेद्‌ ‍
टी -२० खेलमा, टोली जहिले पनि एक अष्टराउन्डरको लागि तृष्णा गर्दछ जसले उनीहरूलाई ब्याटि inमा राम्रो बल दिन सक्छ र बलिlingमा केही राम्रो स्पेल फ्याँक्न सक्छ। शाहबाज अहमद पनि त्यस्तै खेलाडी हुन् जसले दुवै गर्न सक्छन् ...
Parimatch - 12000 ₹ BONUS सम्म!
© 2022 IPL2021 · · इन्डियन प्रिमियर लिग २०२१
Parimatch का लागि दर्ता गर्नुहोस् र आफ्नो टोलीहरू हेर्नुहोस् नि: शुल्क लाइभ स्ट्रिम!
नि: शुल्क हेर्नुहोस्
Nepali English	 Hindi	 Persian	 Urdu	 Bengali	 Myanmar	 Tamil	 Thai